Eduzi SEO akpaaka | Martech Zone
A na-akpọ infographic a Ntụziaka na-egosi na SEO akpaaka, ma ọ bụ n'ezie banyere akpaaka, ọ bụ ihe gbasara usoro achọrọ iji melite nsonaazụ ọchụchọ engine gị yana atụmatụ na-aga n'ihu. Akụkụ nke usoro nwere ike akpaghị aka… ma ọ bụrụ na ị na-eme ihe dịka ịzụrụ na akpaghị aka backlinks, ụlọ ọrụ gị na-aga maka nsogbu.
Nyocha njirimara nke ọchụchọ bụ usoro nhazi nke chọrọ ka ị mee ọtụtụ nyocha, bulie ọdịnaya gị, mejuputa usoro iji nyochaa nsonaazụ azụmaahịa gị nke ọma, ma gaa n'ihu na-ebuli elu na-aga n'ihu. Enwere m ekele na ihe atụ a lekwasịrị anya na akụkụ 2… otu esi enyocha usoro nyocha gị impacting revenue nakwa na ọ bụ ihe usoro na-aga n'ihu.
Ozi nkowa mgbakwunye site SEO maka Ahịa.
Tags: analysisnjikọ-ụlọnkwado njikọakukoNchọgharị ọchụchọ engine laghachi na ntinye egousoro nyocha ahịa enginesearch engine njikarịchausoro nyocha engineAseo akpaakausoro seoseo roiatụmatụ seo
Dec 7, 2011 na 8:41 PM
Daalụ maka òkè!